Cabdicasiis Xildhibaan, Afhayeenka Wasaaradda amniga Xukuumadda Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Qaraxyaddii shalay ka dhacay xarunta Otto Otto, oo ay wada degan yihiin Wasaaradaha Amniga, Gudaha iyo qeyb kamid ah Taliska ciidanka Booliska Soomaaliya, ayaa abuuray shaki iyo khilaaf cusub DFS dhexdeeda.
Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarka ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 20 qof, halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay, kuwaasi oo ay ku jiraan shaqaale katirsanaa labada wasaaradood iyo askar.
Cabdi Casiis Xilldhibaan, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Soomaaliya, ayaa su'aal ka keenay qaabka uu u dhacay weerarka iyo sida ay ku dhacday in dagaalyanada Al-Shabaab ay ugu suurta gashay inay kasoo gudbaan baraha koonatarool ee ciidamada.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in wax laga xishoodo ay tahay in maalin walba Shacab loo sheego balanqaad amni oo aan waxba ka jirin iyo in markii uu qarax ka dhaco la yiraahdo baaritaan ayaa socda, kaasi oo wax natiijo ah kasoo baxeynin.
Afhayeenka uu u muuqday in uu u hadlayay sida mas'uul sare, ayaa ku baaqay in Weeraradii Otto Otto lagu sameeyo baaris dhab ah, maadama aysan suurta gal ahayn in Al-Shabaab kaligeed ay sidaasi uga fuliso meelaha muhiimka ah weerar noocaan ah.
"Sidee ayey suuragal ku tahay in iyadoo waddooyinka Muqdisho ay xiran yihiin uu Qarax dhaco Muqdisho. Ma is-weydiiseen idinka? Goobta la wareeray waa meel aad loo ilaaliyo," ayuu ku daray hadalkiisa C/casii Xildhibaan.
Isagoo u muuqday mid wax og ayuu Afhayeenka afka ku balaariyay inay jiraan xubno siyaasiyiin kuwaasoo uu sheegay in kaliya dantooda ay tahay lacag inay boorsooyinka ka buuxsadaan, balse aan waxba ka gelin nabad-galyadda iyo danta shacabka.
"Aniga halkaan uma imaan lacag. Mushaar ma qaadan 11 bilood. Balse, waxaa jira siyaasiyiin danley ah oo lacag dooneysa. Shacabka Soomaaliyeed mar walba waxay doortaan dad Lacag doon ah oo Boorsooyin soo qaata," ayuu yiri Afhayeenka.
Siyaasiyiinta Mucaaradka ah ayaa sidoo kale u arkay Qaraxyadaan fursad, iyagoona tooshka ku ifiyay Jilicsanaanta dhanka amaanka ah ee wali ka jirta Laamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya.
Weerarkii shalay ayaa imaanaya iyadoo Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre ay ku faanayeen maalmihii u dambeeyay inuusan wax Qarax ah ka dhicin Muqdisho bishii Ramadan, illaa iyo dhamaadka bishii May.
Hadalka Afhayeenka Wasaarada Amniga oo kamid ah mas'uuliyiinta Waaxda Amniga Gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo xukuumada Xasan Cali Khayre wajahayso dhaliilo culus oo dhanka amniga ah.
Weerarkii Otto Otto oo galaaftay xilka Mas'uul sare
Soomaliya 09.07.2018. 21:45